Home Wararka Al Shabaab oo saraakiil Kenyaan ah ku dilay gobolka Waqooyi Bari ee...
Al Shabaab oo saraakiil Kenyaan ah ku dilay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida
Sida la sheegayo saddex qof ayaa dhimatay ka dib weerar hubaysan lagu qaaday laba bas oo rakaab ah sida ay sheegeen saraakiisha Amaanka dalka Kenya. Waxaa ku jira qof rayid ah iyo laba boolis ah oo u dhintay dhaawacyo soo gaaray kadib markii dagaalyahano looga shakisan yahay in ay ka tirsanyihiin Al Shabaab ay weerareen gaari bas ah.
Dhanka kale, laba sarkaal ee dhimatay waxa ay ka mid ahaayeen 9 sarkaal oo bilays ah oo galbinayay basaska inta u dhexaysa deegaanada Rhamu iyo Banisa markii ay dagaalka la kulmeen sida ay lagu sheegay war ka soo baxay Booliska Kenya.
“Dhamaan saraakiisha waxaa soo gaaray dhaawacyo ka dibna waxaa loo duuliyay Nairobi si ay u helaan daryeel caafimaad oo dheeri ah, waxaan rumaysanahay in ay weerarka soo maleegeen Al Shabaab” ayaa la raaciyay warka ka soo baxay Booliska.
11 ruux rakaab ah oo saarnaa labada bas waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah. Taliyaha booliska ee gobolka waqooyi bari Rono Bunei ayaa sheegay in dagaalyahanadu ay u baxsadeen kayn u dhow goobta dagaalku ka dhacay.
“Waan ku daba jirnaa howlgalo ayaa ka socda xadka Soomaaliya iyo Kenya. Waa la qaban doonaa, ”ayuu yiri Bunei. Basaska ayaa ka ambabaxayay Rhamu waxayna kusii jeedeen Banisa markii lagu weeraray degaanka Kormatto, oo u dhexeeya Olla iyo Serman.
Previous articleGudiga farsamada doorashada Rooble magacaabay maxay soo kordhin doonaan?
Next articleMW Uganda oo magacaabay MW ku xigeen iyo Ra’iisul Wasaare cusub
Dad masaakiin ah oo maanta raashin loogu qaybiyay Muqadisho